4 Ekpere Di Di Niile Buo Ekpere Maka Nwunye Ya | EKPERE NA OZI
4 ekpere di obula kwesiri ikpe ekpere banyere nwunye ya
Gaghị ahụ nwunye gị n'anya karịa mgbe ị na-ekpe ekpere maka ya. Wedata onwe gi niru Chukwu onye puru ime ihe nile ma rio ya ka o mee ihe nani Ya puru ime na ndu gi: nka bu nmekorita nke di elu kariri ihe nile uwa nenye. Ikpegara ya ekpere na-eme ka ị ghọta oke akụ ọ bụ, nwanyị Chineke nyere gị. Na-enwusi ike nke anụ ahụ ya, nke mmụọ yana nke mmụọ.
Mee ka ekpere anọ ndị a duzie gị ka ị na-etiku Chineke maka ụbọchị ọ bụla. (Maka ndị nwunye, echefula ekpere ise ndị a dị ukwuu ikpere di gị.)
Chebe ọ joyụ ya
Daalụ nna, maka nwunye m nyere m. Bụ onye na-enye ezi ihe niile na ngọzi zuru oke, ọ na-atụkwa m n'anya na ị na-egosi ịhụnanya gị site na ya. Biko nyere m aka ịghọta ụdị onyinye ahụ dị ịtụnanya (Jemes 1:17).
Kwa ụbọchị, ọnọdụ na ndakpọ olileanya nwere ike mfe ohi ọ joyụ si ________. Biko kwusi ya ka nsogbu ndi a mee ka uche ya laa n’ebe Gi, onye edemede okwukwe ya no. Nye ya ọ theụ ahụ Jizọs nwere mgbe o mere uche Nna ya n’ụwa. Ka ọ were mgba nile dị ka ihe kpatara ịchọta olile-anya n’ime Gị (> Ndị Hibru 12: 2–3;> Jemes 1: 2 –3).
Mgbe ike gwụrụ ya, Dinwenụ, mee ka ike ya dị ọhụụ. Soro ndị enyi hụrụ gị n'anya na ndị ga-ebu ibu ya gbaa ya gburugburu. Nye ya ihe kpatara ọ ga-eji nwee ume ọhụrụ site na agbamume ha (Aịsaịa 40:31; Ndị Galetia 6: 2; Faịlimọn 1: 7).
Mee ka ọ mata na ọ joyụ nke Onyenwe anyị bụ isi iyi nke ike ya. Chebe ya ka ike gwụ ya ime ihe ị kpọrọ ya ka ọ mee kwa ụbọchị (Nehemaịa 8:10; Ndị Galetia 6: 9).
Nye ya mkpa na-eto eto maka gị
Nna, afọ juru gị mkpa anyị niile dịka akụ gị nile si di n’ime Kraịst. O juru m anya na ị na-echebara ya echiche iji gbojuo mkpa anyị kwa ụbọchị na kwa ụbọchị banyere ndụ anyị. Ọbụna ntutu dị n'isi anyị ka a gụrụ maka ilekọta ụmụ gị (Ndị Filipaị 4:19; Matiu 7:11, 10:30).
Ana m ekwupụta na oge ụfọdụ m na-eche na onwe m dịka onye na-elekọta _______. Gbaghara m maka iwere ihe bụ nke gị n'ezie. Enyemaka ya na-esite n'aka gị. Ọ bụrụ na ọ bụ m, amaara m na m ga-ahapụ gị. Ma ị dịghị ada ada, ị na-eme ya ka ọ dị ka ogige a na-enwe mmiri zuru ezu mgbe nile. Are kwesịrị ntụkwasị obi mgbe niile, mgbe ezuru. Nyere ya aka ịmata na ị bụ ihe niile ọ chọrọ (Abụ Ọma 121: 2; Abụ 3kwá 22:58; Aịzaya 11:14;> Jọn 8: 9 –XNUMX).
Ọ bụrụ na a nwaa ya ọnwụnwa ịchọ nkasi obi n’ihe ọzọ, ka ọ tụlee mata otu ike nke Mmụọ Nsọ Gị si enye ya ohere ijupụta n’olileanya na udo. Onweghi ihe dị n ’ụwa a nke a ga-eji tụnyere ịdị ukwuu nke mmụta gị (Ndị Rom 15:13; Ndị Filipaị 3: 8).
Chebe ya pụọ ​​na mwakpo ime mmụọ
Gi Chineke, bụ ọta nke gbara anyị gburugburu. I n protectchebe ayi n’aka onye-nkpab thatu nke nāchọ ila-n'iyì, I gaghi-emechu ayi iru. Ogwe aka gị dị ike, okwu gị dịkwa ike (Abụ Ọma 3: 3, 12: 7, 25:20; Ọpụpụ 15: 9; Luk 1:51; Ndị Hibru 1: 3).
Mgbe ndị iro wakporo ya, mee ka okwukwe ya n’ebe protect nọ chebe ya ka ọ ga-ejigide ọnọdụ ya. Weta Okwu gị n’obi ya ka ọ nwee ike ịhapụ mwakpo ya ma lụọ ọgụ ọma ahụ. Nyere ya aka icheta na give na-enye anyị mmeri site na Kraist (> Ndị Efesọs 6: 10–18; 1 Timoti 6:12; 1 Ndị Kọrịnt 15:57).
I merie ma wepu ikike ime mmụọ na ihe niile nọ n'okpuru gị. N'ihi obe, ______ bụ ihe ọhụụ, ọ nweghịkwa ihe nwere ike ikewapụ ya na ịhụnanya gị pụrụ iche na nke a na-enweghị atụ (Ndị Kọlọsi 2:15; 1 Pita 3:22; 2 Ndị Kọrịnt 5:17;> Ndị Rom 8:38 -39).
E meriri onye iro. I tiwara isi ya (Jenesis 3:15).
Mee ka ọ hụkwuo ya n'anya
Nna, i buru ụzọ hụ anyị n'anya nke ukwuu nke na ị zitere Ọkpara gị ka ọ nọchie anyị. Lee ka o si dị ịtụnanya n’echiche na mgbe anyị bụ ndị mmehie, Kraịst nwụrụ maka anyị. Onweghi ihe anyị mere ga-atụnyere akụnụba amara Gị (1 Jọn 4:19; Jọn 3:16; Ndị Rom 5: 8; Ndị Efesọs 2: 7).
Nyere ________ eto na mbido ịhụnanya ya n’ebe You nọ. Mee ka ike ya, mma na amara gị na-atụ gị ụjọ. Mee ka ọ matakwuo kwa ụbọchị banyere ịdị omimi na obosara nke ịhụnanya Gị ma zaghachi na ịhụnanya ya na-eto eto (Abụ Ọma 27: 4; Ndị Efesọs 3:18).
Nyere ya aka ka ọ hu m n’anya n’ọdighi-isi m niile ka m mụtara ịhụ ya n’anya dịka Kraist hụrụ nzukọ ụka n’anya. Na anyị nwere ike ịhụrịta onwe anyị dịka see na-ahụ anyị, anyị ga-enwekwa ọ enjoyụ imeju ọchịchọ nke ibe anyị na alụm di na nwunye anyị (Ndị Efesọs 5:25;
Biko mee ka o nwee ịhụnanya na-eto eto n’ebe ndị ọzọ nọ n’ihe ọ bụla ọ na-eme. Gosi ya otu ị g’esi abụ onye nnọchi anya Kristi n’uwa na otu ị ga - esi bụrụ nwanyị e jiri ịhụnanya kọwaa ka ndị ọzọ wee too gị. N'ihi ịhụnanya ahụ, ka o soro onye ọ bụla zisa ozi ọma (2 Ndị Kọrịnt 5:20; Matiu 5:16; 1 Ndị Tesalonaịka 2: 8).
Nke gara aga Post Gara aga post:Conquhụnanya merie n'ire ọkụ "ọkụ Vicka siri ike"
Next Post → Post ozo:Gịnị ka Baịbụl kwuru gbasara ịlụ karịa otu nwaanyị?